32 Hablood oo Ka Qalin Jabiyey Xirfaddaha Suuq-gaynta iyo Soo Dhawaynta
(Hadhwanaagnews) Monday, April 16, 2018 18:42:35
Xaflad Loogu Foolladaynnaayay 32 Hablood oo Ka Qalin Jabiyey Xirfaddaha Suuq-gaynta iyo Soo Dhawaynta
Hargaysa(HWN):-Hay’adda Wadinga ah ee Havoyoco ayaa waxa ay soo qaban-qaabisay Xaflad shahaaddooyin lagu guddoonsiinaayey 32 hablood oo da’yar ah oo bartay xirfadaha Iibinta, Suuq-gaynta iyo Soo Dhawaynta.
Hablahan ayaa la siinayey tababar socday muddo lix billood ah. Tababarkaas oo ay iska kaashadeen hay’ada wadaniga ah ee Havoyoco iyo Xarunta Kobcinta iyo Kor u Qaadida Ganacisga ee Magaceeda loo yaqaano SMEF ( the Small and Medium Enterprise Facility).
Tababarkan ayey u jeedadiisu ahayd sidii hablaha da’yarta ah kor loogu qaadi lahaa xirfadaha ay ku shaqaysan lahayeen. Xafladii qalin-jabinta ee tababarkaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 16/04/2018 lagu qabtay qabtay Hotel Haldoor ee Magaalda Borama. Xafladan
ayaa waxa ka soo qayb galay hablihii dhamaystay tababarka, waalidiintooda iyo marti sharaf kale oo ay mid ahayeen Madaxda Dowlada, Xafiiska SMEF iyo Havoyoco.
Mr Abiib Maxamed Jaawi oo ah madaxa xafiiska Havoyoco ee Gobolka Awdal, waxa uu u mahad-naqay Hablihii tababarkaas dhammaystay, waxaannu ku Ammaanay sida ay ugu dhabar adaygeen mudadii ay casharadu u socdeen iyo sidii wanaagsanayd ee ay macalimiintii tababarkaas bixinaysay ula shaqeeyeen una dadaaleen. Mr Abiib ayaa sidoo kale ugu baaqay ganacsatada in ay shaqaalaysiiyaan Hablahan xirfadaha sare la baray si ganacsigoodu u noqdo mid guulaysta oo mudo badan sii jiri kara.
Yasmin Moh’ed Abdioo ka mid ahayd hablihii dhamaystay tababarkaas ayaa tidhi “aad iyo aad ayaan ugu faraxsanay in aan dhamaystay tababarkan. Waxaan ugu mahad naqayaa Havoyoco iyo SMEF aqoonta dheeraadka ah iyo xirfada shaqo ee aan helay intii aan tababarkan ku jiray. Mudadii aan ku jiray bishii tijaabada shaqado ee la i geeyey, waxa ii suurto gashay in aan ku guulaystay shaqadaydii kowaad. Barmaamijkan ay Havoyoco iyo SMEF iska kaashanayeen waxa uu ii furay nolal cusub oo guul badani iiga soo dhex muuqato”.
Sidoo kale, Mohamoud Jama Khayre oo ka socday Hay’ada SMEF ayaa sheegay in ganacsiga guushiisa iyo horumarkiisuba ay ku xidhan tahay hadba sida uu uga shaqeeyo ama ugu dadaalo barida iyo kor u qaadida xirfadaha shaqaalihiisa. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay ganacsata in ay u baahan yihiin hablahan da’yarta ah ee la baray xirfadaha iibinta, suuq geynta iyo soo dhawaynta macaamiisha.
Waxa sidoo kale, madashaa ka hadlay Mr. Abdishakuur Ali Aar, oo ah madax isku xidhka mashaariicada Havoyoco, Abdiaziz Hersi Warsame, oo ka tirsan Ha’yada SMEF iyo Mustafe Maxamed oo ah Xoghayaha Gobolka Awadal.
Dhammaantood waxay dhiiri galiyeen hablihii qalin jabinayey. Waxay sidoo kale balan qadadeen in ay ka wada shaqayn donaan sidii hablahaasi shaqo u wada heli laheen iyaga oo hablaha ku dhiiri galiyey in si firfircoon ay shaqo u raadsadaan. Ugu danbayntii waxaa shahaadooyin la gudoonsiiyey Hablihii dhamaystay xirfadahaasi shaqo.